Imandarmedia.com: एकाएक फेरिए काठमाडौंसहित ११ जिल्लाका सिडिओ, हेर्नुहोस् कसलाई कहाँ पठाइयो ?
Main News » एकाएक फेरिए काठमाडौंसहित ११ जिल्लाका सिडिओ, हेर्नुहोस् कसलाई कहाँ पठाइयो ?
एकाएक फेरिए काठमाडौंसहित ११ जिल्लाका सिडिओ, हेर्नुहोस् कसलाई कहाँ पठाइयो ?
गृह मन्त्रालयले ११ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)सहित ११ सहसचिव र १५ उपसचिवको सरुवा गरेको छ । नयाँ सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा गृहले पुरानो मिति राखेर शुक्रबार सरुवा गरेको हो ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
Trending : Main News